ranziTube VIDEOS : Zvitima zveVhidhiyo, Yekumhanyisa Yekumhanya Zvitima Mavhidhiyo, TCDD Mavhidhiyo, Tram Vhidhiyo
Zvinoenderana nemifananidzo yakaburitswa pasocial media munaJune 2, 2020, Turkey Mauto Echisimba akatumidzirazve Atılgan yakadzika nzvimbo yakakwirira yekudzivirira mhepo kuenda kuIdlib. Mune nhau mune DefenceTurk; "Turkey inguva." [More ...]
Hutungamiriri hweDziviriro Chemhando yeRepublic of Turkey yakazivisa kuti yechitanhatu ye Submarine Ruzivo Distribution System yakagadziriswa ne HAVELSAN yakaedzwa yeNew Type Submarine Project. Turkish Defense Viwanda inobata matanho murudzi rutsva rwe coronavirus (Kovid-19) kubuda [More ...]
Iyo nzira yeIstanbul-Izmir Motorway, Toll uye Toll Calculator Moturu: Ndakasvika iyo yekupedzisira zvakare mune imwe yeTurkey yakanyanya kukosha porojekiti. Marmara naAegean vachange vava pedyo. Pakati peIstanbul neIzmir, [More ...]
Turkey Yekutanga Local uye National Land Robot CALLED: Konya AKINSOFT software kambani yakavambwa ne "akınrobotic" mana-makumbo robhoti yakagadzirwa fekitori "Arat", mushure memakore gumi mubatanidzwa R & D mainjiniya vanoshanda 4 [More ...]
SpaceX, iyo yakavambwa naamuzvinabhizimusi Elon Musk muna 2002, yakabudirira kuburitsa nzvimbo yakadzimira yakatakura vanhu kekutanga. Falcon 9 roketi uye Crew Dragoni yakatakura Robert Behnken naDouglas Hurley kuenda kuInternet Space Station [More ...]
inenge mwedzi yapfuura yakazivisa kuti Apple smart foni "iPhone SA 2020 ', yakaburitswa muTurkey. Apple's 'iPhone 2020 SE' modhi, nemitengo inotangira pa- $ 5.300 ikozvino kuTurkey. Apple yakaunzwa pakati paApril [More ...]
Kana zvikamu zvese zvapera, Istanbul Airport ichapa ndege kunzvimbo dzinopfuura mazana matatu dzinosvika zana nemamiriyoni mazana maviri emadhiza. Iyo documentary yakapfurwa yeIstanbul Airport, iyo ichaita dzinenge zana ndege, iri kugadzirira kusangana nevateereri. [More ...]
Nekutanga kwekufamba kwepasuru kwengoro dzinotakurwa kubva kuMarmaray, yekutanga isina kuvhiringidzwa kutumira kubva kuAnatolia kuenda kuTekirdağ kwakazoonekwa. Nemhemberero yakaitwa pamwe nekutora chikamu kwaGavhuna Yıldırım, yekutanga kutumira zvinhu yakatakura kubva kuTekirdağ Chitima Chiteshi kuenda ku ASYAPORT chiteshi chakatakurwa pamarori. [More ...]
Gurukota rezvemagetsi uye Nezvekuchengetedzwa kwezvinhu, Dönmez akati, "Yedu Fatih Drilling Ship yapedza gadziriro yayo yekupedzisira yeshanduko kuBlack Sea. Ngarava yedu yakagadzirira Bhosphorus kuyambuka. Fatih, nomusi wa 29 Chivabvu, pamhemberero dzekukunda kunofadza, kubuda kweGungwa Dema [More ...]
Rori yaifamba muMersin yakabhururuka pamusoro pechitima chekutakura ichibva kubhiri. Wakati rori yakanyura muchitima chinofamba chinofamba munzira 4-5, mutyairi weRussia akakuvara zvakanyanya mutsaona. Zvinoenderana neruzivo rwakawanikwa, tsaona [More ...]
Izvo zvakaziviswa kuti YHT ndege dzichatanga musi wa 28 Chivabvu. Republic of Turkey State Railways (TCDD) Transportation A.Ş. pamba inofarira muHupenyu (HPP) nekodhi, iyo High Speed ​​Chitima (YHT) yakagovana hurukuro dzevhidhiyo pamabatiro aungaita matikiti. Citizens, [More ...]
Inowanikwa muAdapazari, Sakarya Turkey Wagon Viwanda Co National Electric Chitima, yakagadzirwa pa (TÜVASAŞ) Fekitori, ichave yakapindwa nemutungamiri wenyika, Recep Tayyip Erdoğan, kubva ku Ankara, pamakore makumi matanhatu nemashanu ekukundwa kweIstanbul, ichatambwa musi wa 29 Chivabvu. [More ...]
Pasinei nezvose zvakashata uye kusagadzikana kunokonzerwa nehutachiona hwekorona (COVID-19) kubuda pasi rose, ASELSAN inoenderera mberi nemabasa ayo mukati megadziriro yekuzvidzivirira pasina kukanganisa mune yekugadzira uye yekutengesa kodhi. ASELSAN's "Hassa Optik" fekitori muSivas [More ...]
Sangano reNational Defense Ministry razivisa kuti makomisheni uye hupenyu hupenyu hwevesangano remagandanga PKK akabatwa mudunhu reCukurca neHaftanin, kuchamhembe kweIraq. Mune chirevo chakaitwa nebazi rezvekudzivirirwa kwenyika; "Kuitwa neHero yedu Commandos [More ...]
KARAYEL Tactical UAV System ndiyo yekutanga uye yega Tactical Unmanned Ndege yakarongedzwa uye yakagadzirwa zvinoenderana neNATO 'Airworthiness in Civil Airspace' Standard STANAG-4671 yekuongorora uye kuongorora. KARAYEL system, yega yega [More ...]